Filtrer les éléments par date : mercredi, 12 février 2020
mercredi, 12 février 2020 23:03
Ministeran’ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola: Voatendry ho Sekretera Jeneraly i Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra androany ny didim-panjakana manendry an-dRtoa Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo ho Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola, hisolo toerana an’i Bien-Aimé Raoelijaona.
Filohan’ny « Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) » teo anivon’ny ministera ity ihany izy talohan’izao nanendrena azy ho Sekretera Jeneraly izao.
mercredi, 12 février 2020 22:08
Camille Vital: Nanolotra ny taratasy fanendrena azy ho ambasadaoro tamin’ny filohan'i Maorosiana
Tonga tao amin’ny « Château du Réduit » lapam-panjakana maorisiana, androany 12 febroary i Albert Camille Vital, nanolotra ny taratasy fanendrena azy ho ambasadaoron’i Madagasikara ao amin’ny nosy Maorisy, tamin’ny filohan’ny Repoblikan’i Maorisy, Pritvirajsing Roopun.
Ity no marika fa mandray ny asany feno maha ambasadaoro azy i Albert Camille Vital. Folo taona izao i Madagasikara no tsy nanana ambasadaoro tao amin’ity Nosy rahavavy ity.
Tamin’ny 18 septambra 2019 i Albert Camille Vital no voatendry ho ambasadaoro atsy Maorisy. Izy no fahafito hitana io andraikitra io hatramin’ny taona 1968 nisokafan’ny ambasady malagasy ao an-toerana.
Jeneraly miaramila ary efa praiminisitra tamin’ny andron’ny tetezamita i Albert Camille Vital.
mercredi, 12 février 2020 21:54
Ambatolampy: Tovolahy roa maty an-drano, nilomano
Hilomano no nitsofohana tao amin’ny dobo, fahafatesana no nitsena. Androany tolakandro no niseho ity loza ity, teto Ambatolampy Vakinankaratra.
mercredi, 12 février 2020 21:49
Tranomaro – Amboasary Atsimo: Dahalo iray azo sambobelona nangalatra omby
Nitrangana halatr’omby tao Antsira, Kaominina Tranomaro, Distrika Amboasary Atsimo, androany alarobia 12 febroary tokony ho tamin’ny 3ora maraina. Omby miisa 58 no lasan’ny dahalo mitam-basy. Roso tamin’ny fanarahan-dia niaraka tamin’ny Fokonolona ny Zandary sy ny Miaramila manao « opération » ao Tranomaro vantany vao nahazo fampandrenesana.
Nisy ny fifandonana tao Ankazoabo, Kaominina Tranomaro. Dahalo iray azo sambobelona. Tafaverina amin’ny tompony ny omby miisa 51, maty notifirin’ireo dahalo ny fito. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny Zandary miainga amin’ity dahalo voasambotra ity.
Enin-dahy mitam-piadiana nanafika mpandraharaha ara-toekarena iray avy any Mananara Avaratra raha nivoaka Shop Orange ity farany.
Nanenjika an’ireo jiolahy eran’ny tanànan’i Toamasina ny Polisy nampian’ny Zandary vantany vao nahazo fanairana. Niditra an-tsehatra ihany koa ny Polisy iray isan’ireo miambina ny Banky Foibe, nitifitra avy hatrany rehefa tsy nety najanona ny jiolahy iray nitondra basy poleta rehefa teo akaiky Gastro Bazar Be. Voatifitry ny zandary teo amin’ny ranjony ilay jiolahy ka lavo ary dia noraisim-potsiny.
Nanakana sy naka ankeriny fiara 4x4 an’olontsotra sendra nandalo ny jiolahy dimy. Notifirin’izy ireo ankitsirano ny mpamilin’ilay fiara ary maty tsy tra-drano. Nisy ny fifampitifirana tamin’ireo jiolahy sy ireo Polisy nanenjika azy ireo. Inspektera Polisy iray naratra voatitra teo amin’ny sorony. Voasambotra ny telo tamin’ireo jiolahy. Tafatsoaka tamina fiara Hyundai i10 miloko manga ny roa. Eo ampikarohana io fiara io ny mpitandro ny filaminana mitambatra ahitana Zandary sy Polisy, nanamafy ny sakana rehetra mivoaka ny tanànan’i Toamasina.
mercredi, 12 février 2020 21:13
Tolagnaro: Zandary iray nidoboka am-ponja
Nandrahona ho faty tamin’ny basy teny an-tanany ny Ben’ny tanàna Ifarantsa, Distrikan’i Taolagnaro sady nanakorotana tao amin'ny biraon’ny Kaominina ity zandary ity ny folakandron’ny 04 febroary 2020 rehefa nentin’ny hamamoana.
Zandary miasa ao amin’ny kaompanian’i Tolagnaro izy io, fa nalefa hamita iraka tao Ifarantsa. Nasaina nalain' ny « Chef de patrouille » ny basy teny amin'io zandary io, ary nentina tao Tolagnaro avy hatrany ihany koa ilay zandary nandika lalàna nanokafana fanadihadiana.
Natolotra ny Fampanoavana androany Alarobia maraina izy ary dia tazomina am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjaben’i Tolagnaro.
Enina izao ireo zandary voatana am-ponja vonjimaika nanomboka tamin’ny 1 janoary 2020, ary nahatratra 82 izy ireo nandritra ny taona 2019.
mercredi, 12 février 2020 20:56
Nuri Kaya Bakkalbasi: Nouvel Ambassadeur de Turquie à Madagascar
Le nouvel Ambassadeur de la Turquie à Madagascar, Nuri Kaya Bakkalbasi a présenté ses Lettres de Créance auprès du Président de la République Andry Rajoelina, ce 12 février 2020, au Palais d’État Iavoloha.
A l’issue de son entrevue, le nouvel Ambassadeur de la Turquie a exprimé la volonté de son pays de raffermir les relations de coopérations avec Madagascar, que soit dans le secteur publique et privé.
Au nouvel Ambassadeur d’ajouter que des résultats concrets sont déjà attendus dans le courant de cette année, surtout dans le secteur privé, et ce, dans différents domaines tels que la construction, l’import-export, les infrastructures.
Cette présentation de lettres de créance marque la prise de fonction officielle du nouvel Ambassadeur turque.
mercredi, 12 février 2020 20:44
LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA- ALAROBIA 12 FEBROARY 2020
Ny Filankevitry ny Minisitra dia nankatoa ny fanendrena ireto mpiasampanjakana
ambony ireto :
• Ramatoa RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo, dia ho voatendry ho Sekretera
• Atoa RAKOTOVAO Vy Vato Rakotomaditra, dia voatendry ho Governoran’ny faritra
• Jeneraly Razafitsotra Olivier, dia voatendry ho Governoran’ny faritra Vatovavy
Soram-piankohonana: Harindra hitovy avokoa ary hametraka ny lamina vaovao
Hapetraka ny lamina sy paikady hanomezana soram-piankohonana ho an’ny zanaka malagasy rehetra manerana ny Nosy, ka ahafahana mahafantatra ny Malagasy isambatan’olona raha vao teraka, ary ahafahana mahafantatra ny tsirairay isam-batan’olona. Ny tanjona dia tsy hisy intsony ny zaza malagasy tsy manana kopia na olon-dehibe tsy manan-karatra, na koa ireo voalaza fa manan-karatra maro isaky ny faritra honenany.
Hisy araka izany ny fomba fitantanana vaovao ny rejisitry ny soram-piankohonana amin’ny alalan’ny solosaina ka hanamorana ny fahafantarana ny isan’ny olom-pirenena malagasy, hanamorana ny fitantanana ny raharaham-panjakana izay hifaneraserana amin’ny olom-pirenena tsirairay.
mercredi, 12 février 2020 20:01
Mampikony: Naato tamin’ny asany ny lehiben’ny Distrika
Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra androany ny didim-panjakana nanendrena ny lehiben’ny Distrikan’i Mampikony, Faritra Sofia. Tsy mbola misy fanendrena izay ho solony.